पुस्तक समिक्षा : फिरफिरेमा पीडाको अतिरञ्जना :: Kitab Kiro - Complete Book News
पुस्तक समिक्षा : फिरफिरेमा पीडाको अतिरञ्जना
२०७४ मंसिर ९ गते सञ्जीव पाेखरेल
म मानवशास्त्रको विद्यार्थी -आख्यानको समिक्षा मेरो दक्षताको विषय होइन । यसअघि नेपाली भाषाका केही आख्यानको समिक्षा गरेको त छु तर केवल रहरका लागि । यो भूमिका बाँध्नुको तात्पर्य के भने यो लेखन वास्तविक अर्थमा फिरफिरेको समिक्षा नभइ उक्त उपन्यासका बारेमा आलोकाँचो पाठकको साङ्गोपाङ्गो टिप्पणीमात्र हो ।
यद्दपि, समकालिन साहित्यका केही कृतिहरू पढ्दा तिनमा बिछट्ट निराशा र उदासी पाउने गरेको छु । हाम्रा युवा लेखकहरूले पनि दु:खको सतही अभिव्यक्ति र यसप्रतिको अतिरुचिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखेको छु । मेरो विचारमा हाम्रा साहित्यिक रचनाले यस्तो प्रवृत्तिलाई नै लेखनको आधार बनाउनेमा भन्दा पृथक र सिर्जनात्मक शैली पछ्याउनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ जसमा फिरफिरे सफल हुनसकेको छैन । खुशीको मधुरो छायाँ पनि उपन्यासमा पर्न; नसकेकाले फिरफिरे अस्वाभाविकरूपमा अँध्यारो र पट्यारलाग्दो बन्नगएको छ ।
उपन्यासको पुछारमा सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा लेखकले कर्नाली ब्लूजपछि अर्को उपन्यास लेख्न सुरु गरेको र ६५००० शब्द पुगेपछि रोकेर फिरफिरे लेख्न थालेको बताएका छन् । यो उपन्यास पढेपछि मलाई लाग्यो उनले कुनै नयाँ विषयवस्तुमा लेख्न खोजिरहेका रहेछन् । 'आफूलाई थाहा नभएको' नयाँ विषयवस्तुमा लेख्ने लेखकको प्रयत्न बढी सिर्जनात्मक पो हुनसक्थ्यो कि !? त्यसलाई नि;रन्तरता दिएको भए अझ राम्रो हुनेथियो कि ?!
साभार : http://ujyaaloonline.com/news/54051/firfire-review/
बुद्धिसगरको यो कृति अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |